Metro İstanbul, Cuma Günü Yolcu Rekoru Kırdı | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်သောကြာနေ့ကမက်ထရိုအစ္စတန်ဘူလ်ခရီးသည်စံချိန်ချိုး
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
သောကြာနေ့က Metro Istanbul သည်ခရီးသည်စံချိန်ကိုချိုးခဲ့သည်
Metro Istanbul ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကသောကြာနေ့တွင်အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းပျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
"M2, M5 လိုင်းများနှင့်စုစုပေါင်းခရီးသွားအရေအတွက်မှတ်ပုံတင်! 18 အောက်တိုဘာ 2019 သောကြာနေ့တွင် M2 Yenikapı-Hacıosmanမက်ထရိုလိုင်းသည် 602.432၊ M5 Üsküdar-Çekmeköyမက်ထရိုလိုင်း၊ 234.774 နှင့်စုစုပေါင်း 2.372.714 ခရီးစဉ်တွင်ခရီးသည်များသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၏စံချိန်ကိုချိုးဖောက်သည်” ။
အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရာခိုင်နှုန်းလျှော့အတွက်သောကြာနေ့စက်တင်ဘာလ 22 50 20 / 09 / 2017 ဥရောပမိုဘိုင်းအပတ်ကြောင့် Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးနေသည်။ 22 စက်တင်ဘာ 2017 ကိုသောကြာနေ့တွင် Istanbul တွင်ကျင်းပမည်။ 06: 00-20: 00:
Izmir Metro 250 တထောင်မစ္စတာချိုးစံချိန်နှင့်အတူ boarding ခရီးသည် 17 / 11 / 2014 mirzmir Metro သည် 250 ထောင်ချီသောခရီးသည်နှင့်အတူခရီးသည်မှတ်တမ်းကိုချိုးသည်: :zmir Metro A.Ş. အောက်တိုဘာလတွင်မက်ထရိုကို အသုံးပြု၍ Izmir မှ 8 သန်းပေါင်း 250 လူ ဦး ရေသန်း XNUMX ၏အထွေထွေမန်နေဂျာSönmez Alev က "ဒီမြေအောက်ရထားမှာအမြဲတမ်း ...
YHT ခရီးသည်ကြောင့်အအေးနှင့်တကွမိုဃ်းရွာ၏စံချိန်ချိုးဖဲ့ 28 / 01 / 2017 အအေးနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် YHT သည်ခရီးသည်စံချိန်တင်မှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ အအေးနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် Konya တွင် 160 လေယာဉ်များကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း၊ YHT သို့ခရီးသည်များပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ခရီးသည်မှတ်တမ်းအမြန်ရထားဆိုးရွားသောရာသီဥတုအခြေအနေများမှာဖျက်သိမ်းခြင်း…
Bursa, ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စံချိန်ချိုး 11 / 01 / 2019 Smart junction application များ၊ အပိုလမ်းကြောများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Bursa Metropolitan Municipality မှစျေးနှုန်းလျှော့ချမှုများသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
Bursaray 14 ဇွန်လအတွက်ခရီးသည်စံချိန်ချိုးဖဲ့ 19 / 06 / 2019 Bursaray မှ 14 ဇွန် 2019 သောကြာနေ့က 300 ထောင်သောင်းချီသောခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာသည့်အချိန်ပြည့်ခရီးသည်မှတ်တမ်းမှာပျက်သွားသည်။ Kestel, Görükleနှင့် Emek ကိုဆက်သွယ်ထားသော 402 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာရှိသောရထားလမ်းစနစ်၏ကွန်ယက်တစ်ခုဖြင့်
အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရာခိုင်နှုန်းလျှော့အတွက်သောကြာနေ့စက်တင်ဘာလ 22 50
Izmir Metro 250 တထောင်မစ္စတာချိုးစံချိန်နှင့်အတူ boarding ခရီးသည်
Bursaray 14 ဇွန်လအတွက်ခရီးသည်စံချိန်ချိုးဖဲ့
ပြည်သူ့သောကြာနေ့တွေ့ဆုံBalçova cable ကိုကားတစ်စီး်ဆောင်မှုများ
အနောက်တိုင်း Anatolia ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဇွန်လ 22 2012 သောကြာနေ့ကအထွေထွေညီလာခံသွား
အဲဒီမှာအာရုံစူးစိုက်မှုİZBAN '' မီးကဒီသောကြာနေ့
transistor 2014 နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲသောကြာနေ့စတင်